မနေ့ညကနေအခုထိတချိန်လုံး ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် ဆိုတဲ့ Myanmar idol အဆိုရှင်နှစ်ယောက်မှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိူအပေါ် ဝေဖန်တာတော့တဖက်စောင်းနင်းကျလွန်းတယ်လို့မြင်မိတယ်။။။။။။
ဒိုင်တွေကိုဆဲဆိုပြီး ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကိုအားပေးရင်ပဲတဏှာရူး ဏှာဘူးတွေဖြစ်ကုန်ရော။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူပဲအနိုင်ရတယ်ဘာညာပြောနေတဲ့ခင်များတို့ မရှိဘူးလား???မေးမယ် သူ့ကံနဲ့သူချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာလူဖြစ်တာ အပြစ်လား??? ချမ်းမြေ့မောင်ချိူချမ်းသာမှုကြောင့်ပြောနေတဲ့ပုံက မနာလိုသလိုဖြစ်မနေဘူးလား????ရပ်ကွက်ထဲသာမာန်အရပ်သားအရက်မူးပုဆိုးစလွယ်သိုင်းဆဲတော့ အဲ့လူကအဲ့လိုဘဲမူးရင်သွေးဆိုးတယ်လောက်နဲ့ပြီးသွားပြီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူမူးပြီး ဆဲမိရင်ပိုက်ဆံရှိလို့ ဘယ်သူ့မှလူမထင်ဘူး။ဘာညာအမြင်တွေက မူးပြီးဆဲတာချင်းအတူတူ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အမူးသမားအပေါ်အမြင်က ပိုပိုသာသာလေး အပြစ်ဖြစ်နေသလိုဖြစ်နေပြီဗျ။
အခုအခြေအနေကဒိုင်တွေဗီတိုအာဏါသုံးပြီး ဆွဲထုတ်ရမယ့်အခြေအနေမှမဟုတ်ပဲ။ အသံစစ်လူရွေးခံဖို့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ဘယ်နှစ်ခါအထိကြိုးစားခဲ့ရသလဲ???ခင်များတို့ပြောသလို အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကမို့ ဆိုတာကြောင့် ဆိုရင်လဲ ပိုက်ဆံလဲရှိတယ် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကလဲဖြစ်တယ် ဟုတ်ပြီ သူသာဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ခွေထုတ်ချင်ရင် ခက်မလား????
vote လဲဘယ်သူ့မှမပေးဖူးဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဖြိုးမြတ်အောင်ကိုနိုင်စေချင်ရင် အရင်ကထက်ပိုပြီး vote ပေးကြလေဗျာ။ စည်းမျဉ်းကိုကပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ vote ကဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆိုနေမှ တကယ်တမ်းခင်များတို့မတရားဘူးထင်ရင်အခု စည်းမျဉ်းကိုပြင်ခိုင်းရမှာဗျ။။။
ချမ်းမြေ့မောင်ချိူဆိုတာ ခင်များပြောသလိုစုတ်ပဲ့အရည်အချင်းမဲ့နေရင် အခုလိုအဆင့်တော့ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဖြိုးမြတ်အောင်တော်တယ် ကောင်းတယ် အနိုင်ရစေချင်တယ်ဆိုရင် ရှိတာပေါင်ပြီး vote ပေးကြလေဗျာ။။။။ ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေက အပေါ်ယံအမြင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေရာမှာ ကျနော့အမြင်တော့ မစ္ဆရိယစိတ်များလွန်းတယ်။
ဆင်းရဲလို့ဂရုဏါသက်တတ်ကြသလို တဖက်ကပြိုင်ပွဲဝင် ငွေရှိတာချမ်းသာတာနဲ့ပဲ အမုန်းမပွားကြပါနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေမြင့်ကြပါ။ ဖြိုးမြတ်အောင်ပဲရရ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုပဲ ရရ ကျုပ်ကလက်ခုပ်တီးပေးမယ်။ဘယ်သူ့ဖန်မှလဲမဟုတ်ဘူး။
တကယ်တမ်းခင်များတို့ တိုက်ခိုက်ရမှာ vote ကို ဝယ်မရဘဲတစ်ယောက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ်ရင် တခြားမျှတမယ့်နည်းလမ်းကို ချပြပြီးတောင်းဆိုကြပါလို့ ပြောချင်တယ်။ခင်များတို့ပြောနေတာတွေဘေးကကြည့်နေရင်းဒိုင်တွေအတွက်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ချမ်းမြေ့မောင်ချိုအတွက်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ ခင်များတို့ဝေဖန်လို့ဘဲ မပြိုင်ဘဲ (သို့)တမင်သက်သက်အမှားအများကြီးလုပ်ပေးပြီး ဖြိုးမြတ်အောင်အနိုင်ရတယ်ဆိုပါစို့ အဲ့ဒါကရောတကယ်ရသင့်လို့ပါပြောမယ်ဆိုရင် ခင်များတို့တွေ စိတ်ဓါတ် ခင်များတို့ပဲမြင်တတ်ကြပါစေ …….
Credit to Nay Da Na
မနညေ့ကနအေခုထိတခြိနျလုံး ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုနဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျ ဆိုတဲ့ Myanmar idol အဆိုရှငျနှဈယောကျမှာ ပိုကျဆံခမျြးသာတဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိူအပျေါ ဝဖေနျတာတော့တဖကျစောငျးနငျးကလြှနျးတယျလို့မွငျမိတယျ။။။။။။
ဒိုငျတှကေိုဆဲဆိုပွီး ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကိုအားပေးရငျပဲတဏှာရူး ဏှာဘူးတှဖွေဈကုနျရော။ ပိုကျဆံရှိတဲ့သူပဲအနိုငျရတယျဘာညာပွောနတေဲ့ခငျမြားတို့ မရှိဘူးလား???မေးမယျ သူ့ကံနဲ့သူခမျြးသာတဲ့မိသားစုမှာလူဖွဈတာ အပွဈလား??? ခမျြးမွမေ့ောငျခြိူခမျြးသာမှုကွောငျ့ပွောနတေဲ့ပုံက မနာလိုသလိုဖွဈမနဘေူးလား????ရပျကှကျထဲသာမာနျအရပျသားအရကျမူးပုဆိုးစလှယျသိုငျးဆဲတော့ အဲ့လူကအဲ့လိုဘဲမူးရငျသှေးဆိုးတယျလောကျနဲ့ပွီးသှားပွီး ပိုကျဆံရှိတဲ့သူမူးပွီး ဆဲမိရငျပိုကျဆံရှိလို့ ဘယျသူ့မှလူမထငျဘူး။ဘာညာအမွငျတှကေ မူးပွီးဆဲတာခငျြးအတူတူ ပိုကျဆံရှိတဲ့အမူးသမားအပျေါအမွငျက ပိုပိုသာသာလေး အပွဈဖွဈနသေလိုဖွဈနပွေီဗြ။
အခုအခွအေနကေဒိုငျတှဗေီတိုအာဏါသုံးပွီး ဆှဲထုတျရမယျ့အခွအေနမှေမဟုတျပဲ။ အသံစဈလူရှေးခံဖို့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို ဘယျနှဈခါအထိကွိုးစားခဲ့ရသလဲ???ခငျမြားတို့ပွောသလို အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးကမို့ ဆိုတာကွောငျ့ ဆိုရငျလဲ ပိုကျဆံလဲရှိတယျ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးကလဲဖွဈတယျ ဟုတျပွီ သူသာဖွတျလမျးနညျးနဲ့ခှထေုတျခငျြရငျ ခကျမလား????
vote လဲဘယျသူ့မှမပေးဖူးဘူး။ ခငျဗြားတို့ဖွိုးမွတျအောငျကိုနိုငျစခေငျြရငျ အရငျကထကျပိုပွီး vote ပေးကွလဗြော။ စညျးမဉျြးကိုကပရိတျသတျပေးတဲ့ vote ကဆုံးဖွတျပါတယျဆိုနမှေ တကယျတမျးခငျမြားတို့မတရားဘူးထငျရငျအခု စညျးမဉျြးကိုပွငျခိုငျးရမှာဗြ။။။
ခမျြးမွမေ့ောငျခြိူဆိုတာ ခငျမြားပွောသလိုစုတျပဲ့အရညျအခငျြးမဲ့နရေငျ အခုလိုအဆငျ့တော့ရောကျစရာအကွောငျးမရှိဘူး။ ဖွိုးမွတျအောငျတျောတယျ ကောငျးတယျ အနိုငျရစခေငျြတယျဆိုရငျ ရှိတာပေါငျပွီး vote ပေးကွလဗြော။။။။ ကြုပျတို့လူမြိုးတှကေ အပျေါယံအမွငျနဲ့တိုကျခိုကျနရောမှာ ကနြော့အမွငျတော့ မစ်ဆရိယစိတျမြားလှနျးတယျ။
ဆငျးရဲလို့ဂရုဏါသကျတတျကွသလို တဖကျကပွိုငျပှဲဝငျ ငှရှေိတာခမျြးသာတာနဲ့ပဲ အမုနျးမပှားကွပါနဲ့ စိတျဓါတျတှမွေငျ့ကွပါ။ ဖွိုးမွတျအောငျပဲရရ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုပဲ ရရ ကြုပျကလကျခုပျတီးပေးမယျ။ဘယျသူ့ဖနျမှလဲမဟုတျဘူး။
တကယျတမျးခငျမြားတို့ တိုကျခိုကျရမှာ vote ကို ဝယျမရဘဲတဈယောကျတဈခု ဒါမှမဟုတျရငျ တခွားမြှတမယျ့နညျးလမျးကို ခပြွပွီးတောငျးဆိုကွပါလို့ ပွောခငျြတယျ။ခငျမြားတို့ပွောနတောတှဘေေးကကွညျ့နရေငျးဒိုငျတှအေတှကျလဲစိတျမကောငျးဘူး။ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုအတှကျလဲစိတျမကောငျးဘူး။ ခငျမြားတို့ဝဖေနျလို့ဘဲ မပွိုငျဘဲ (သို့)တမငျသကျသကျအမှားအမြားကွီးလုပျပေးပွီး ဖွိုးမွတျအောငျအနိုငျရတယျဆိုပါစို့ အဲ့ဒါကရောတကယျရသငျ့လို့ပါပွောမယျဆိုရငျ ခငျမြားတို့တှေ စိတျဓါတျ ခငျမြားတို့ပဲမွငျတတျကွပါစေ …….